Saraakiisha Mareykanka: Dhaxalsuge MBS oo hooyadi ka qariyey aabbihiis Boqor Salmaan (NBC News) – Radio Daljir
Maarso 15, 2018 3:45 g 0
War hadda ay shaacisey shabakadda NBC News ee dalka Mareykanka ayaa sheegaya in dhaxalsuge Amiir Maxamed bin Salmaan (MBS) uu muddo labo sano ah qarinayey hooyadi, kana qariyey aabbihiis, labadaas sanana uusan Boqor Salmaan marna arag xaaskiisa. Sida ay soo xigatey NBC News, dhaxalsuge Amiir MBS ayaa labadaas sano aabbihiis, waa Boqor Salmaan e, u sheegayey in hooyo ay caafimaad ugu maqantahay New York, ama hadba waddan kale.
Dhaxalsuge Amiir Maxamed bin Salmaan ayaa asbuuca danbe, 20ka bishaan Maarso, laga filayaa in uu booqdo aqalka cad ee Mareykanka.
Warkan ayaa NBC News waxaa u xaqiijiyey saraakiil Mareykan ah iyo kuwa sirdoonkaba. Kuwo sirdoonka Marakeynka ayaa qirey in ay horey u dhageysteen taleefoona ku saabsan hadba waxa loo sheego Boqorka oo aad u tabey xaaskiisa. Boqor Salmaan waa 82 jir hadda la shaacinayo in uusan ku joogin miyir dhameystiran.
Qarinta xaaska Boqorka isla markaasna ah hooyada Maxamed bin Salmaan ayaa lala xiriirinayaa baqdin uu dhaxalsuge MBS ka qabo hooyadi, loona sababeynayo ayada oo aan la rabin in uu Boqor ka noqdo dalka, iskana horkeeno bulshada Sacuudiga.
Dhaxalsuge bin Salmaan oo ah 31 jir ayaa bishii Noofeembar ee sannadkii hore 2016 si toos xukunka u maroorsadey, xireyna wixii amiirro iyo maalqabeeno ahaa oo la dhihi karey waa kahorimaan karaan xukun maroorsiga dhaxalsuge MBS.
Dhaxalsuge Maxamed bin Salmaan hooyadi waa Amiirad Fahda bintu Falaax Al Xadhleen. Qarinta hooyada ayaa si rasmi u soo shaacbaxdey bishii Siteenbar 2015 markii uu Boqor Salaam booqday Aqalka Cad iyo Madaxweyne Obama, markaas oo Boqor Salmaan uu Obama u sheegay, “in uu aad u tabey xaaskiisa, ayna caafimaad u joogto New York, uuna aad u jeclaan lahaa in uu New York booqdo.”
Saraakiisha warka ay NBC ka soo xigatey ayaa sheegay in Madaxweyne Obama uusan Boqor Salmaan u sheegin in xaaskiisu aysan New York joogin, marnana aysan imaan.
Warka oo dhammaystiran, kuna qoran afka Ingiriiska riix xiriiriyaha hoose:
Siyaasadda & Dhaqaalaha 481 Wararka 21380